Maxkamadda Ciidamadda ee Puntland: 43 maxbuus oo 13 jir ku jiro ayay ku xukuntay dil toogasho. - iftineducation.com
Maxkamadda Ciidamadda ee Puntland: 43 maxbuus oo 13 jir ku jiro ayay ku xukuntay dil toogasho.
iftineducation.com – 43 Maxbuus ee dilka lagu xukumay ayaa waxaa ku jira caruur da’doodu ka hooseeyso 18 sanno.
Maamul gobolleedka Puntland ayaa xukun dil ah ku xukumay khamiistii 16 bishan juun 43 maxbuus oo lagu soo qabtay dagaalkii bartamahii bishii maarso ku dhexmaray Alshabaab iyo Puntlan deegaanada
Togga Suuj iyo tuulada Garacad ee gobollada Mudug iyo Nugaal.
Caruurta Puntland dilka ku xukuntay
Maxabiista dilka lagu xukumay ayaa ah dhallinyaro da;doodu u dhaxayso 13 jir illaa 19 sanno jir.
Maxkamadda ciidamadda ee Puntland ayaa sheegtay in dil lagu xukumay dhallinyarada, iyadoo xukunka u ahaa mid qarsoodi oo saxaafadda laga qariyay. lamana ogsoona inay dhallintaasi heleen garsoor difaaca madama ay qaarkood yihiin kuwa aad u da’yar.
Kooxda Alshabaab ayaa 14 bishii maarso dagaal ku soo qaaday deegaanno ka tirsan Puntland. iyadoo dagaalkaasi u socday muddo lix cisho ka badan inkastoo markii dambe Puntland sheegtay inay dagaalka ku guulaysatay.
10 Bishan juun ayay ahayd markii horjoogaha Puntland Cabdiwali Gaas saxaafadda Puntland u sheegay inay dili doonan maxabiista Alshabaab ee ku xiran xabsiyadda, isagoo taas ku micneeyey inay Alshabaabku dileen Dhudi Yuusuf oo ahayd haween ay madaxweynaha qaraabo yihiin oo kooxaha argagaxisadu Gaalkacayo ku dileen.
Horjooge Gaas oo ku hanjabaya in la dili doonno Caruurta
Maxkamadda xukunka dilka ka dhacayay oo ku taalla magaalada Garoowe ayaa waxaa ku sugna markii xukunka la ridayay Horjoogaha Puntland Cabdiwali Gaas iyo weliba saraakiil ciidanka ka tirsan. waxaana la filayaa inay Puntland maalmaha soo socda ku dhaqaaqdo xukun argagax leh oo aan hore Soomaaliya uga dhicin. haddii aan beesha caalamka iyo hay’addaha xaquuqda caruurtu arrintan soo faragelin.
Caruur Alshabaab ciidan ka dhigtay
Kooxda Alshabaab iyo xiita maamulada Soomaaliya oo Puntland ka mid tahay ayaa caruurta yaryar u isticmaala ciidamo.
Yusuf Ali Adan
qisooyinka jaceylka dhabta ah